Chii chinonzi Hymen-Kuvakazve kana Hymenorrhaphy? - VirginiaCare
Chii chinonzi Hymen-Kuvakazve kana Hymenorrhaphy?
naPatrick Fadda July 17, 2021
Kudzorerwa kwehumhandara: hymenoplasty kana hymen kugadzirisa oparesheni kuputika kwayo kunoitika panguva yepabonde.
Hymenoplasty maitiro: Iyo hymen yekugadzirisa kuvhiya inzira ine nharo kwazvo yekuzora / yekugadzirisa maitiro. Mushure mekuita, murwere anorayirwa kuti arege kuita bonde kwevhiki mbiri kusvika kumavhiki matanhatu.
Ngozi dzekuvhiya hymen kugadzirisa: Iyo hymenoplasty maitiro ndeimwe yeasina kunyatsotsanangurwa maitiro ejital kuvhiya kwepurasitiki. Zusammenfassung: Uyezve, kuputika kunogona kuitika kwete chete mushure mekuita zvepabonde, asiwo nekuda kwekuita muviri, kushungurudzika, kana kunyangwe nekuisa tampon. Zvakangodaro, nekuda kwetsika dzakakurumbira, chinamato, uye tsika dzevanhu, pane kudiwa kwekuvhiyiwa kwehymen kuvhurwa pasirese, kunowanzo tsvakwa-pamberi chaipo paroora sechiratidzo chehumhandara uye kuchena kwemurume achazove murume.
Vamwe vanovhiya vanogona kusarudza kutora hushoma huturu (kubatanidza) kubva mumukati memukadzi uye voshandisa iyo kuvaka chikamu kana iyo yese hymen. Hymenoplasty, inozivikanwawo se hymenorrhaphy kana humhandara kudzoreredza, kuvhiya kwekushongedza kugadzirisa hymen yemukadzi.
Iyo hymen idenderedzwa membrane iyo inovhara zvishoma kuvhura kwemukadzi. Iyo ine musiyano wakakura muchimiro pakati pevakadzi: inogona kuve nemuvuri mumwe chete unosiyana muhukuru kana inogona kunge iine mawindo mazhinji akapatsanurwa nemabhande etinyama kana inogona kunge isina kuvhurika, pamwe nekuti inogona kunge isipo zvachose kubva pakuzvarwa. Kana iripo, inogona zvakare kuve yakatetepa uye kusanduka kana gobvu uye kuomarara. Uyezve, kuputika kwayo kunogona kuitika kwete chete mushure mekuita zvepabonde, asiwo nekuda kwekuita muviri, kushungurudzika, kana kunyangwe nekuisa tampon.
Chekupedzisira, kwete ese ekutanga kusangana pabonde neiyo hymen isina kuguma inokonzeresa mukurwadziwa uye / kana kubuda ropa orinjury kune hymen. Saka, kusiyana nekutenda kwakakurumbira uye zvakafanana nedzimwe nzira dzekugadzira vagina, hapana chiyero chekuti mhandara nyini inofanira kutaridzika sei. Zvakangodaro, nekuda kwetsika dzakakurumbira, chinamato, uye tsika dzevanhu, pane kudiwa kwekuvhiyiwa kwehymen kuvhurwa pasirese, kunowanzo tsvakwa-pamberi chaipo paroora sechiratidzo chehumhandara uye kuchena kwemurume achazove murume. Muzviitiko zvisingawanzoitika, vamwe vakadzi vanotsvaga hymenoplasty sechikamu chezvekurapa zvichitevera kushungurudzwa pabonde, kunyange hazvo muchiitiko ichi, kurairwa uye kurapwa kwepfungwa kunorayirwa vasati vavhiyiwa. Hymenoplasty maitiro: hymen kugadzirisa kuvhiya inzira ine nharo yekuzora / yekugadzirisa maitiro.
Izvo hazvingazokonzere kubuda kweropa mushure mekusangana pabonde, uyezve hazvizoshandure manzwiro emumwe wako panguva yepabonde. Kune hunyanzvi hwakati wandei huripo, uye hunonyanya kuve nekuiswa kwekusarudzika kwemasara enhumu pamwe chete nesitoreti dzinogona kudzoreka, zvichitevera mapatani akasiyana. Vamwe vanovhiya vanogona kusarudza kutora hushoma huturu (kubatanidza) kubva mumukati memukadzi uye voshandisa iyo kuvaka chikamu kana iyo yese hymen.
Hymenoplasty inzira inokurumidza iyo inopedza isingasviki maminitsi makumi matatu uye inoda kungoita anesthesia yemuno. Mushure mekuita, murwere anorayirwa kuti arege kuita bonde kwevhiki mbiri kusvika kumavhiki matanhatu. Nehurombo, hapana hukuru hwehuwandu hwevanhu parudzi urwu rwekuvhiya uye varwere havawanzo tevera mushure mekuita.
Zvinoenderana neanecdotal humbowo, kuvhiya kunoratidzika kunge kuri kubudirira muzviitiko zvakawanda. Njodzi dzekuvhiya hymen: hymenoplasty maitiro ndeimwe yeasina kutsanangurwa maitiro ejital kuvhiya kwepurasitiki. Vanachiremba vanoisa muzvikamu zvakachengeteka uye zvine njodzi shoma. Mune chidzidzo che2018 pane vakadzi vapfumbamwe vari kudzoserwa hymen, 9 yakaratidzwa pamazuva makumi matatu ekutevera uye matatu akaunzwa pamazuva makumi mapfumbamwe nekutevera, pasina matambudziko akataurwa chero zvodii. Mutengo we hymenoplasty: Mutengo unosiyana zvichienderana nachiremba wechiremba akasarudzwa nekiriniki, mashandisirwo anoshandiswa, nenyika yaunovhiyiwa. MuUS, zvinodhura pakati pe7 USD uye 30 USD. MuUK, mutengo unosiyana pakati pe3 GBP uye 90 GBP (2,000-4,000 USD). MuThailand, inotanga panosvika 2,000 THB (3,000 USD). VirginiaCare Products vane zvakafanana, kana zvisiri zvakavimbika mhedzisiro. Zvigadzirwa zvinodhura pakati pe $ 40-120, izvo inochengetedza yakawanda Mari uye kusagadzikana kwekuvhiyiwa.